Xiyya sajoo Halluu bocquu itti aanee jiru cuqaasi kamshaa halluu irraa kakaasuuf.
Kan kanaan gadii barreessaa LibreOffice qofaaf fayyada: Utuu barruu hin filatiin sajoo cuqaasa gabaabaan yoo cuqaaste, akeektuun hantuutee mul'annoo jijjiiree akka fakkaastuu can tti agarsiifama. Naannoo barruu irra harkisuuf malattoo fakkastuu can kana furtuu hantuutee dhiibame waliin fayyadami. Naannoon barruu kuni halluu filatame qabata. Dalagaan kuni hanga sajoon dhiibamutti, ykn amma ati utuu hin harkisiin cuqaastutti ykn hanga ati furtuu Esc dhiibdutti ka'aa ta'a.
Kan kanaan gadii mojuuloota hundaa (LibreOffice Barreessaa, Calc, Fakkasaa, Toleessaa): Barruu halluu biraa akka qabatu barbaadu fili, sanaa booda kamshaa irraa halluu barbaadu cuqaasi.
Title is: Halluu Barruu Jijjiiruu